impermanence – Dhammadīpa
Foulness in the Body
Posted on 13 Apr 2019 by Ashin Sopāka
“Contemplating foulness in the body,
“Suchabhikkhu who sees rightly
That sage has overcome all bonds.” – Iti 85
ānāpāne paṭissato ;
passaṁ ātāpi sabbadā.
“Sa ve sammaddaso bhikkhu,
yato tattha vimuccati;
”ကိလေသာကို ပူပန်စေတတ်သော လုံ့လရှိသောအခါ ခပ်သိမ်း ကောင်းစွာ မြင်သော ထိုရဟန်းသည် ခန္ဓာကိုယ်၌ အသုဘအခြင်းအရာကို ရှုသည်ဖြစ်၍လည်းကောင်း၊ ထွက်သက်ဝင်သက်၌ ထင်သော သတိရှိသည်ဖြစ်၍လည်းကောင်း၊ အလုံးစုံသော သင်္ခါရတို့၏ ချုပ်ငြိမ်းမှုကို ရှုသည်ဖြစ်၍လည်းကောင်းထိုအလုံးစုံသော သင်္ခါရတို့ ချုပ်ငြိမ်းရာ၌ အရဟတ္တဖလဝိမုတ္တိဖြင့် လွတ်မြောက်၏။ ထို့ကြောင့် ထိုရဟန်းသည် အဘိညာဉ်ကိစ္စ ပြီးဆုံးပြီဖြစ်၍ ငြိမ်းအေးပြီးလျှင် ယောဂလေးပါးကို လွန်မြောက်ပြီးသူဖြစ်တော့၏”ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
“Quán bất tịnh trên thân,
Chắc vượt khỏi ách nạn.”
Cow Skull Hà Nội
Posted in Dhamma	| Tagged anicca, dhamma, impermanence, sati
Posted on 30 Sep 2017 by Ashin Sopāka
“Bhikkhus, the skeletons ofasingle person, running on and wandering in saṁsāra for an aeon, would makeaheap of bones,aquantity of bones as large as this Mount Vepulla, if there were someone to collect them and if the collection were not destroyed.”
“Ekapuggalassa, bhikkhave, kappaṁ sandhāvato saṁsarato siyā evaṁ mahā aṭṭhikaṅkalo aṭṭhipuñjo aṭṭhirāsi yathāyaṁ vepullo pabbato, sace saṁhārako assa, sambhatañca na vinasseyyā”ti.
dukkhassa ca atikkamaṁ;
Sa sattakkhattuṁ paramaṁ,
စုဆောင်းထားသူလည်း ရှိခဲ့မူ စုဆောင်းထားတိုင်းလည်း မပျက်စီးခဲ့မူ တစ်ကမ္ဘာတ်လုံး ပြေးသွားကျင်လည်သော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်၏ ကြီးစွာသော အရိုးပေါင်း အရိုးပုံ အရိုးစုသည် ဤဝေပုလ္လတောင်ကြီးမျှပင် ရှိသည် ဖြစ်ရာ၏။
ဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းကောင်း ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်း သမုဒယသစ္စာကိုလည်းကောင်း၊ ဒုက္ခကို လွန်မြောက်ရာ’နိရောဓ’သစ္စာကိုလည်းကောင်း၊ ဒုက္ခ၏ချုပ်ငြိမ်းရာ (နိဗ္ဗာန်သို့) ရောက်ကြောင်းဖြစ်သော မြတ်သော အင်္ဂါရှစ်ပါးရှိသော မဂ္ဂသစ္စာဟု ဆိုအပ်သော အရိယသစ္စာတို့ကိုလည်းကောင်း၊ အကြင်အခါ၌ ကောင်းသော ပညာဖြင့် မြင်၏။ ထိုအခါ ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည် (ကာမဘုံ၌) ခုနစ်ကြိမ် အလွန်ပြေးသွား၍ သံယောဇဉ်အားလုံးတို့၏ ကုန်ခြင်းကြောင့် ဒုက္ခ၏အဆုံးကို ပြုလေတော့၏။
Frog Skeleton eaten by Ants ©Ashin Sopāka 2017
Posted in Dhamma	| Tagged dhamma, four noble truths, impermanence, noble eightfold path, saṁsāra